warkii.com » War cusub oo soo baxay: Sooraj Pancholi ayaa uur uyeelay Disha xili Sushant arinkaas loo dilay!!
War cusub oo soo baxay: Sooraj Pancholi ayaa uur uyeelay Disha xili Sushant arinkaas loo dilay!!
Sheekada kiiska Sushant Singh maalin walba waji cusub ayuu yeelanaya waxaana hader soo baxay war cusub oo kii hore ka weyn markaana qoyska Pancholi ayaa loo dhacay hadaba sheekada socota oo faah faahsan hoos kaga bogo:
1-Sooraj Pancholi waxuu horey xiriir jaceyl ula lahaa gabadhii is dileysay Jia Khan balan jaceyl ayuuna kaga baxay taasi ayaana kaliftay ine is disho hadaba wiilkan ayaa sanado kadib la saaxibay gabadha lagu magacaabo Disha Salian.
2-Disha waxay ahed gacanyaraha Sushant waxaana uur u yeelay Sooraj oo kaga baxay ballan walba waxayna go’aansatay inee is disho sida Jia Khan weyna is dishay.
3-Sushant ayaa sirta gabadhaan ogaa waxuuna qabsaday Sooraj xitaa marke Disha nooled ayee mar isku dhaceen Sooraj iyo Sushant waxaana so kala dhex galay Salman Khan oo isaga marwalba qoyska Pancholi xigsado.
4-Hadaba Sushant wax badan ayaa la cabsi galiyay inuusan arinkaan ka hadlin iyo geerida Disha kadib wuuna diiday waxuuna dhihi jiray wax walbo waan sheega sidaas ayaana Sushant loo dilay si uusan u hadlin waxaana dileen Sooraj Pancholi iyo aabihiis Aditya Pancholi ayagoo garab ka helayaan Salman Khan.
Sheekadan isku taxan ayaa internet-ka qabsatay waxaana ka hadleen qoyska Sooraj oo wax kama jiraan ku tilmaameen sheekadan waxay ka dhaheen, taariikhda Disha iyo sababte isku dishay qaabka kale loo qoray iyo waliba Sooraj naftirkiisa waxuu dhahay waan so diyaarinena la soco.